जामाचोबाट काठमाडौं चियाउँदा
२०७७ भदौ २७ शनिबार १५:०४:००
“काठमाडौंको आँगनमै छ– नागार्जुन डाँडा । तर मेरा लागि भने यहाँ आउन औँसी–पूर्णे जुर्नुपर्यो ।”
फूलबारी गेटबाट हाइकिङको पाइला उठान गरेपछि मैले भनेँ ।
अट्टहासपूर्ण हाँसो हाँसे जयनाथ ।
अर्का सहयात्री थिए– अमेरिकी नागरिक माइकल लेच । उनी नेपाली भाषा राम्ररी बुझ्छन् र बोल्छन् पनि । धन्न सुनेनन् उनले । नत्र के भन्ठान्थे होलान् !
पहिलोपटक आउँदा आधा शताब्दीको थियो माइकलको उमेर । छैंसठ्ठीऔँ वसन्तमा सयर गरिरहेका छन् उनी अहिले । तैपनि पुरानै जोश, जाँगर र ऊर्जा देखिन्छ उनमा ।
उनी ट्रिनिटी कलेज, हार्टफोर्ड कनेक्टिकटका प्रोफेसर । सन् १९९९ मा उनी परिचयात्मक भ्रमणका लागि नेपाल आएका थिए । त्यसपश्चात् आफ्ना कलेजका विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक शिक्षा दिन नेपाल ल्याउन थाले । नेपालका थुप्रै गन्तव्य चहारिसकेका छन् उनले । योपटक अठार विद्यार्थीलाई लाङटाङ क्षेत्रमा पदयात्रा गराई त्यहाँको जनजीवन, संस्कृति र इतिहासका बारेमा प्रत्यक्ष अनुभव अध्ययन गराउने ध्येयले आएका थिए । दशदिने पदयात्रा गर्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थीहरू काठमाडौं आइपुग्नुअगावै ‘वार्मअप हाइकिङ’ गर्न चाहन्थे उनी ।
जामाचो हाइकिङ गर्ने सल्लाह दिएका थिए जयनाथ भण्डारीले । काठमाडौंको उकुसमुकुस वातावरणलाई छोडेर प्रकृतिमा सयर गर्ने लालसाले उनीहरूको पछि लागेको थिएँ म ।
शिशिर ऋतुको पुछारको दिन ।
घामले भर्खरै मात्र पूर्वी आकाशगङ्गामा डुबुल्की मारेको थियो । शीतले लछप्पै भिजेका पातहरू लेसिएका थिए ढुङ्गेनी खुड्किलामा । घामको आभा परेका शीतका थोपाले टल्किन्थे मेरा आँखा । गुँड छाडेर उज्यालो क्षितिज हेर्न निस्केका चकचके चराहरूले खसाल्दै थिए रूखबाट शीतकै थोपाहरू । बाटोभरि छरिँदै थियो हिजोदेखि नै मेरा आँखामा बसेको खुसी । वासन्ती बहारमा प्रवेश गर्दा नागार्जुनको चिसो र हरियो उज्यालोले चङ्गिएथ्यो मेरो शरीर ।
मज्जा आउँछ– उकालो हिँड्नुमा पनि । धर्ती नछाडीकनै उचाइ लिनुको मज्जा त छँदै छ; फेरि प्रकृतिसँग संवाद गर्दै हिँड्नुको आनन्द झन् बेग्लै ।
नाङ्गा पैतालाले तुषारो टेक्दै सेराबेसीबाट दिनहुँ नुवाकोट उकाली–ओराली गरेको याद आयो मलाई । खाली खुट्टाले हिँड्दा बाक्लिएको मेरो पैतालालाई सितिमिति कहाँ छुन्थ्यो र ठिहीले ! जानमात्र लाग्थ्यो एक घण्टा । नहिँडेको त कहाँ हो र मैले ! उहिले बाध्यताले हिँड्नुपर्थ्यो, अहिले रहर लाग्छ हिँड्न । बालवयकोे स्मृतिसँग मोहित भएथेँ म ।
नागार्जुन उकालिँदै गर्दा होचिँदै छ ऐतिहासिक विरासतको धङधङी ओढेर सुतिरहेको सहर । बालाजुतिर हुइँकिरहेका छन् मोटरगाडी र तुवाँलो बनेर उठिरहेका छन् धुवाँ–धुलोका मुस्ला । त्यहीँ छ तुवाँलोमा रगमगिएको मान्छेका गतिशील जीवन । पातलो कुहिरो लेसारिएको थियो बालाजुमाथिको आकासमा । पछाडि फर्केर त्यही दृश्य र परिवेशलाई मोबाइलमा कैद गर्दै उकालिँदा पत्तै भएन समय बितेको ।
कमिलाको ताँतीझैँ लाइन लागेर उकालिइरहेका थिए तलबाट षोड्शीहरूको एक हुल । तन्नेरीहरू माथिल्लो डिलमा पुगेर पर्खिरहेका छन् तिनैलाई । हठात् याद आयो मलाई स्व. हरिबहादुर रञ्जितको कालजयी गीत–
‘बालाजुमाथि हो नि नारान साइँली र माइलीका ताँती
एउटी आउँछु भन्थी रेशमी चुल्ठो बाटी...’
गीत गुन्गुनाउँदा बिहान–बिहानै मेरो मनमा सल्बलाएथ्योे बाफिलो तरङ्ग ।
प्रत्येक वर्ष चैत शुक्ल पूर्णिमाको दिनलाई वज्रयान बौद्ध परम्परामा ‘हुतिपुन्ही’ मान्ने गरिन्छ । यो दिन बिहानै उठेर बालाजु र बाईसधारामा स्नान गरेर यहाँ आई पूजा, पाठ र एक सय आठ दीप प्रज्वलन गर्ने परम्परा छ । मेला भर्ने साइँँली र माइलीको ताँती लाग्थ्यो होला यो बाटोमा । र, त साइँला र माइलाहरूले यस्तो गीत गाउँथे होलान् । अड्कल लगाएँ मैले ।
नागार्जुनको सेरोफेरोमै छ– तीनवटा महाङ्काल । नागार्जुनको सेरोफेरोमै छ– पचलीभैरव, श्वेतभैरव र आकाशभैरव । नागार्जुनभित्र छन्– नागार्जुन साधकले साधना गरेको वसुबन्धु गुफालगायत चारवटा गुफा । हाल वसन्तपुरमा भएको कालभैरव पनि बालाजुबाटै लगिएको रे । न्युरोडको महाङ्काल र टेकुको पचलीभैरव पनि सायद यतै कतैबाट लगिएको हुन सक्छ । पुरानो गुह्येश्वरीलगायत प्राचीन स्तूपहरू हुनुले पनि काठमाडौंको बस्ती नागार्जुनकै सेरोफेरोबाट विस्तार हुँदै गएको बुझ्न कठिन हुँदैन ।
पर्खालले घेरिएको छ– नागार्जुन जङ्गल ।
चन्द्रशमशेर बेलायत जाँदा बगैंचाको विषयमा कुरा चलेछ । ‘हाम्रो पनि अठार कोसको बगैंचा छ,’ भनेर फुर्ती लगाएका रहेछन् । नेपाल फर्केपछि नागार्जुन संरक्षण गर्न पर्खाल लगाएका थिए । त्यसो त जङ्गबहादुरकै पालामा विसं १९२३ मै ‘डिमार्केसन’ भइसकेको थियो नागार्जुन क्षेत्रको । विसं १९२६ मा तत्कालीन राजा सुरेन्द्रले वनजङ्गल र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि लागु गरेको ऐनको लेखोट छ नागार्जुनको पश्चिमपट्टिको ऐनडाँडामा । ऐन कानुनको दस्ताबेज भएको कारण डाँडाको नाम ऐनडाँडा रह्यो । यसले देखाउँछ, वनजङ्गल एवम् वन्यजन्तु संरक्षणप्रति गम्भीर थिए पूर्वजहरू ।
बेलायतबाट फर्केपछि त्रिचन्द्र कलेज पनि बनाए उनले । कम्तीमा आफ्नै इज्जतका लागि भए पनि केही त गर्थे जहानियाँहरूले ! अहिलेकाहरू स्वैरकल्पनाका उडान त भर्छन् तर माखो मार्न सक्दैनन् । केही गरिहाले पनि अर्कैका हितमा गर्छन् । देश र जनताको हितमा काम गर्ने राजनेता जन्मेला कि भन्ने आशाको टुसा उमार्न यो जीवनमा कहिल्यै सकिएन । सोच्दै थिएँ म ।
बाह्र थुम्की छन्– नागार्जुन पर्वतमालामा । जङ्गलको एउटा छेउमा जङ्गबहादुरले बनाएको छहरे दरबारको अवशेष छ । अर्को छेउमा जुद्धशमशेरले बनाएको नागार्जुन दरबार छ । तत्कालीन मल्ल राजा प्रताप मल्लकी पत्नी अनन्तप्रियाले हालको हलचोक र ल्हुतिकोटको पश्चिमतर्फको भागमा सुन्दर उद्यान बनाउन लगाएकी थिइन् । त्यसैले रानीवन भनिन थालियो नागार्जुन जङ्गललाई ।
चाखलाग्दा कथनहरू छन्– नागार्जुनको नामकरणका सम्बन्धमा ।
सत्ययुगमा हालको ठूलोखोला, कोल्पुखोला, छत्रेदेउराली र कुमरीलगायत क्षेत्रमा नाग र भैरवहरूको सभा बसेछ । सभाको निर्णयानुसार सबैको शक्तिपुञ्ज एउटै विश्वरूप बनेर नागदह जान राति नै हिँडेछन् । तर मनमैँजु पुग्दा उज्यालो भएछ । त्यसपछि विश्वरूप खुम्चिएर पछि हटेछन् । त्यही विश्वरूपको स्वरूपमा अवस्थित पर्वत नै नागार्जुन हो भन्ने जनश्रुति पाइन्छ ।
महाभारत प्रसङ्गअनुसार पाण्डवहरू वनबास रहेका बेला यही जङ्गलमा थिए । दुर्योधन पक्षले पाण्डवलाई मार्नका निमित्त नागलाई पठाएका थिए । यो कुरा अर्जुनले थाहा पाएछन् । पछाडि फर्केर हेर्दा फँणा उठाएर आफूलाई डस्न लागेको देखेपछि तत्कालै नागको शिर छेदन गरिदिएछन् । यसरी नाग र अर्जुनको कथा जोडिएकाले यस पहाडको नाम नागार्जुन रहन गएको कथन छ ।
महायानी दार्शनिक आचार्य नागार्जुनले यही पर्वतमा रहेको गुफामा साधना गरी सिद्धि प्राप्त गरेका थिए । त्यसैले यस स्थानलाई नागार्जुन पर्वत भन्ने गरिएको पाइन्छ ।
यही कुरा हबर्ट डेक्लिर, बेल्जियन दार्शनिकले पनि पुष्टि गरेका छन् ।
उकालिँदै गर्दा यसैसम्बन्धी चर्चा गर्यौँ हामीले ।
“लेट्स टेक अ सर्ट ब्रेक !”
थलीमा पुगेपछि माइकल लेच बोले ।
करिब सवा घण्टा हिँडिसकेका थियौँ हामी । स्वच्छ हावा पिएर पुनर्ताजगी जो भर्नु थियो, उकालोले थकाएको ज्यानमा । थलीमा लागेको पारिलो घाममा ढाड सेकाएथ्यौँ हामीले ।
काठमाडौंको पश्चिममा सदाबहार हरियाली फिँजाएर लमतन्निएको छ– नागार्जुन पर्वत । थलीबाटै देखिन्छ २,१२८ मिटरको उचाइबाट बौद्ध तोरणहरूले आमन्त्रित गरिरहेको । दक्षिणतर्फ देखिन्छ सघन सहर । सहरको एकछेउमा तैरिरहेको देखिन्छ– स्वयम्भूको ढिस्को । ढिस्कोमा देखिन्छ– अद्वितीय आँखासहितको स्वयम्भूनाथ महाचैत्य । स्वयम्भू जति सुन्दर देखिन्छ, यसको उत्पत्ति र विकाससम्बन्धी मिथकले भयङ्कर रहस्यमय बनाइदिएको छ । भविष्यमा मिहिन अध्ययन हुँदै जाला– स्वयम्भूको वास्तुकला, मूर्तिकला, मन्दिर, मूर्ति, चैत्य र त्यहाँ विकसित दर्शनको ।
तलाउको पानी विस्थापित गरी मञ्जुश्रीले काठमाडौंको स्थापना गर्नुअगावै विपश्वी बुद्धले नागार्जुनको टुप्पोमा बसेर तपस्या गरेका थिए रे । उनले कार्तिक महिनामा दक्षिण फर्केर मन्त्र गरी कमलको बिउ दहमा रोपे रे । अर्को वर्षको बैशाख पूर्णिमाको दिन (६ महिनापछि) कमलको फूल उम्रेको र पञ्च रश्मिसहित स्वयम्भू महाचैत्यको उत्पति भएको रे । स्वयम्भूको अर्थ स्वयम् उत्पत्ति भएको भूमि भन्ने बुझिन्छ । स्वयम्भूसित जोडिएको कथा छ नागार्जुन डाँडासँग ।
काठमाडौंको उत्पति र नेपालको एकीकरणबारे कुरा उप्काए माइकलले । मानव विशेषज्ञ हुन् उनी । अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास पनि हो उनको विषय । विशेषगरी दक्षिण एसियाको इतिहासको राम्रो ज्ञान छ उनलाई ।
भर्खरै नौ बजेको छ । अझै डेढ घण्टाको बाटो बाँकी थियो जामाचो पुग्न ।
हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्बी दुवैको आस्था हो– जामाचो । तिब्बत, भुटान र भारतसम्मका तीर्थालुलाई तान्छ विपश्वी बुद्धले । धार्मिक सहिष्णुताको दृष्टिले उदाहरणीय छ– यो टाकुरो । फुल्चोकीकोे कान्छी बहिनीको रूपमा चिनिन्छ– जामाचोलाई । १,३५० मिटर उचाइको उपत्यकामा टेकेर शिरलाई हिमालको हैसियतमा पुर्‍याएको छ– जामाचोले । उपत्यकाको शोभा र पर्यावरणीय जीवनरेखा हो– जामाचो ।
कुहिरोलाई छलेर आकास हेर्नुपर्छ शिशिरभरि । तर आज कुहिरोलाई नै छलेर मुखाकृति देखाइरहेको छ आकासले । मज्जाले डुल्न पाएको थियो बतासले, र त भागाभाग भएको थियो, बिहान सबेरै नागार्जुनको शिरमा उठेका भुईंकुहिरोलाई । तुवाँलोको पनि सातो लान्छ बतासले चलखेल गर्न पाएपछि । नत्र यस्तो मौसम कहाँ जुर्छ र यात्रामा !
“विल द वेदर फेवर अस डुरिङ आवर लाङटाङ ट्रेक ?”
थली छाडेर जामाचोतर्फ लाग्दै गर्दा आकाशतिर हेर्दै माइकलले सोधे जयसँग ।
मौसम बिग्रेर विद्यार्थीले हिमालहरूको दर्शन नपाउने हो कि भन्नेमा चिन्तित थिए उनी ।
“इभन स्प्रिङ स्टार्ट्स फ्रम टुमरो, विन्टर विल स्टिल इक्जिस्ट टिल द एन्ड अफ जनवरी इन द हाइ एलिभेसन । हाउएभर, आई होप भिजिबिलिटी विल बी पर्फेक्ट ।” आश्वस्त पार्न खोजे जयले ।
हाम्रो बाटोमा अवरोध पुर्‍याएनन् जङ्गलका शेरहरूले । मानवगन्धको बानी परिसकेका जङ्गली जन्तुहरूलाई ख्याल रहेछ आफ्नो र अर्काको बाटो । कहिलेकाहीँ कालोपत्रे सडकतिर ओर्लने मृगहरूको पनि नामोनिशान भेटिएन ।
यसै पनि हामी जङ्गलकै बीचमा थियौँ । थलीबाट तेर्पे उकालो सुरु भएपछि फेरि छिर्यौं घना जङ्गलभित्र ।
वसन्त पल्लवित छहारीभित्र बसेर झ्याउँकिरीले निरन्तर बजाइरहेछ बाँसुरी । बुलबुल गाइरहेछ बुलन्द भाकामा । वसन्तागमनको सु–समाचार फैलाइरहेछ कोइली– ‘कुक्कु....’ ‘कुक्कु....’ गर्दै । झिसमिसेदेखि नै काफल पाक्यो भन्दै रनवन डुल्ने काफलपाक्यो चरी चिच्याउँदै छ ‘काफल पाक्या’ ‘काफल पाक्या’ भनेर । लामोलामो श्वास तान्दै छ कण्ठे सुगाका जोडी । पिँजडामा परेका भए ‘गोपीकृष्ण क.....’ रट्ने ती सुगा रनवनमा स्वतन्त्र हुँदा बेसुरा गीत पो गाइरहेछन् ! चारोको खोजीमा जमिन खोस्रिरहेका छन्– पतिव्रता/पत्नीव्रताको धर्म पालना गर्ने कालिजका जोडी । मुखै बैरी मानिने तित्रा गरिरहेछ ‘तीनतारे तित्रिक्क’ । लोग्नेबाट प्रताडित भएर माइती आएकी चेली रोएजस्तै लाग्छ– न्याउलीको ‘न्याउ...’ ‘न्याउ...’ सुन्दा । आ–आफ्नै तालगाँठीमा छन्– तमाम पन्छीहरू ।
न्याउलीको आवाज सुनेर माइकल भन्छन्– “स्वीटेस्ट सङ्स आर दोज द्याट टेल अफ स्याडेस्ट थट ।”
वसन्तको छनक दिइरहेका छन्, लालीगुराँसका मुकुलहरूले । हाँसिरहेका छन् रूखका टोड्का–टोड्कामा सुनाखरी र चाँदीगाभा । पृथक शोभा दिएका छन्, चाँपका फूलहरूले । यतिबेला शिशिरले छर्केकोे रङले लछप्पै भिजेको छु म ।
आँखाले हेरिरहेका छौँ रनवनका दृश्य । कानले सुनिरहेका छौँ पन्छीहरूका कलरव । नाकले सुँघिरहेका छौँ जडीबुटीहरूको सुवास । स्पर्श गरिरहेका छौँ नागार्जुन पर्वतलाई ।
मेरो मनले भनिरहेको छ– ‘पर्यटनको नाममा कतै हामी निकुञ्जको अस्मिता लुटिरहेका त छैनौँ ? यहाँसम्म सवारीको साधन ल्याउँदा पुतलीको हालत के होला ? जन्तुहरू कति त्राहिमाम हुनुपर्ला ?’
जतिजति उकालियो त्यतित्यति नै ठन्डा महसुस हुँदै छ । जवानी बोकेका घामका किरणहरू छिरेका छन् रूखका अन्तरकुन्तरबाट । न्यानो महसुस गर्छौं हामी यतिबेला भने । अन्तिम खुड्किला उक्लेपछि आइपुग्यो जामाचो । चुम्यौँ नागार्जुनको उचाइ । हामी पुग्दा केही भिक्षुहरू माने घुमाउँदै थिए । फोटो खिच्दै र खिचाउँदै थिए हामीजस्तै पर्यटकहरू ।
सिर्सिरे हावामा फर्फराइरहेका छन्– जामाचोभरि टाँगिएका चतुष्कोणीय ध्वजाहरू । जाँदाजाँदै दाहिनेपट्टि छ– रातो पाटी । देब्रेपट्टि छ– सेतो स्तूप । स्तूपमुनि छन्– लक्ष्मी र गणेशलगायत मूर्तिहरू र चन्द्रसूर्य अङ्कित शिलालेख । त्यसको समीपमा छ– नागाकारको प्रस्तर । सीधा अगाडि छ– फराकिलो चउर । चउरकै एकछेउमा छ– बौद्ध गुम्बा । गुम्बाभित्र छ– बुद्धको मूर्ति ।
स्तूपसँगै छ भ्यु टावर । टावरबाट दक्षिणतर्फ देखिन्छ उपत्यकाका तीनै सहर । उपत्यकाको किनारतिर आँखा डुलाउँदै जाँदा देखिन्छन्– काठमाडौंलाई पहरा दिने शिवपुरी, फूल्चोकी र चम्पादेवी । उत्तरतर्फ पश्चिममा देखिन्छन् ककनी डाँडालगायत नुवाकोटका बस्तीहरू र मनासलुदेखि पूर्वमा गौरीशङ्कर हिमालसम्मका धर्सा । हिमालको सौन्दर्य र भक्तजनका आस्थाले सिँगारिएको छ जामाचो ।
केही विदेशी र तिनका गाइडहरू पनि थिए जामाचोमा । चउरमा छुन्मुनाउँदै थिए केहीबेरअघि भेटिएका युवायुवतीहरू । कोही घामको न्यानोमा जवानी अख्य्राउँदै त कोही स्वच्छ वायुलाई प्रदूषित पार्दैँ र कोही तनलाई भूतलमै छाडेर मनलाई हावासँगै आकासमा उडाउँदै । समय बिताउने विशिष्ट कायदा !
“विपश्वी बुद्ध आएर नागार्जुनको टुप्पोमा बसी तपस्या गरेका थिए रे । विपस्वी बुद्धले ध्यान बसेको कारण यस पर्वतलाई ‘जातमात्रोच्व’ नामकरण भएको भन्ने भनाइ छ । अपभ्रंश भएर जामाचो भन्न थालियो ।”
मन्दिर हेरचाह गर्ने दाइले बताए हामीलाई ।
शान्त छ चारैतिर जङ्गलले घेरिएको जामाचो । स्वच्छ हावामा श्वासप्रश्वास गरेर सहरमा पिएको धुलो र धुवाँलाई फोक्सोबाट विस्थापित गरेँ मैले । गुम्बाअगाडिको पाटीमा बसेर ध्यानमग्न पञ्चरश्मिको आभास भएथ्यो मलाई । बसिरहुँजस्तो, प्रकृतिको सौन्दर्यमा हराइरहुँजस्तो, चरासँगै गाइरहुँजस्तो, लुङ्दरसँगै नाचिरहुँजस्तो । निकैबेर टहलिँयौँ हामी । बतासले कानमा तानपुरा बजाउन थालेपछि झरेका थियौँ उही धुले तलाउमा ।